फरक यत्ति हो, अरू बोल्दैनन् म बोलेँ « AayoMail
औंला भाँच्दै उनी सपनाका लिस्ट खोतल्दै थिइन् ‘अनि लाग्थ्यो म अन्तर्राष्ट्रिय मोडल बन्न सकुँ।’ उनी सकेसम्म आफूलाई तन्काइरहन्थिन् ‘खास मेरो हाइट फाइभ–नाइन भइदिए त…।’
‘अहो ती…स…. हजार!’ उनी त फुरुङ्गै।
हिरोइन होइन, हिरो…
‘हो, म बलियो केटी हुन चाहन्छु। हिरोइन् होइन, हिरो…।’
‘हिरोइन’ भन्नासाथ सबैको दिमागमा एउटा बनिबनाउ चित्र छापिन्छ ‘ए, त्यो केटी…!’
सहकर्मी शिरिशमान महर्जनले ‘क्यामेराको फोकस’ मिलाउँदै गर्दा उनले भनिन् ‘ला! भिडियोमा पो…? प्रिपियर नै थिएन।’
‘साम्राज्ञीलाई श्रृङ्गारिन पर्छ र…?’
साम्राज्ञीलाई लाग्छ ‘कति केटीहरूले पनि भोगिरहेका हुन्छन्, केटाहरूले पनि तर त्यही कुरा केटालाई भयो भने त्यो कुरा अनदेखा हुन्छ। तर, केटीलाई पर्दा… त्यो त म आफैंले भोगिराछु अनि केटीले भोग्दा चाहिँ त्यो हाइलाइटमा आउने रहेछ।’
‘मैले जसलाई लिएर आको त्यो पनि मसँग…?’ भुवनलाई पनि लाग्ने नै भो।